တော်လှန်ရေးတွင် အစပိုင်းက ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း အခုချိန်ထိ ဝရမ်းထုတ်မခံရသေးတဲ့ အနုပညာရှင်သုံးယောက် – Cele Lover
တော်လှန်ရေးတွင် အစပိုင်းက ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း အခုချိန်ထိ ဝရမ်းထုတ်မခံရသေးတဲ့ အနုပညာရှင်သုံးယောက်
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ နေတိုးနဲ့ နေခြည်ဦးတို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအနုပညာရှင်တွေအဖြစ် ရပ်တည်နေကြသူတွေပါနော်။ သူတို့ရဲ့ Page တွေဟာလည်း Followers သိန်းနဲ့ ချီပြီး ရှိကြတာကိုလည်း အားလုံးအသိပါပဲနော်။
သူတို့တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာ အစပိုင်းက မပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ Social Punishment လုပ်မှုတွေကြောင့် ခဏတာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီအနုပညာရှင်သုံးယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့Page များတွင် နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း ရံဖန်ရံခါမှသာ တင်လေ့ရှိကြတာပါနော်။အခုချိန်မှာတော့ အနုပညာရှင်များနဲ့ ဂီတလောကမှ အဆိုတော် တော်တော်များများဟာ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရပါပြီ။
အနုပညာရှင်များနဲ့ အတူ ပြည်သူတစ်ချို့လည်း ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရကြောင်း သတင်းများတွင် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း သူတို့သုံးယောက်လုံးမှာ အခုချိန်ထိတော့ ဝရမ်းထုတ်ခံခြင်း မရှိသေးပါဘူးနော်။ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ထဲတွင် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ မခံချင်တာကြောင့် တော်လှန်ရေးတွင် ဟန်ပြလုပ်ခဲ့ကြသူများလည်း ရှိပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
သူတို႔ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးမွာ အစပိုင္းက မပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ Social Punishment လုပ္မႈေတြေၾကာင့္ ခဏတာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီအႏုပညာရွင္သုံးေယာက္ဟာ သူတို႔ရဲ႕Page မ်ားတြင္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း ရံဖန္ရံခါမွသာ တင္ေလ့ရွိၾကတာပါေနာ္။အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ဂီတေလာကမွ အဆိုေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၅၀၅(က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရပါၿပီ။
အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အတူ ျပည္သူတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ၅၀၅(က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔သုံးေယာက္လုံးမွာ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ဝရမ္းထုတ္ခံျခင္း မရွိေသးပါဘူးေနာ္။ အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ထဲတြင္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈေတြ မခံခ်င္တာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဟန္ျပလုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
Previous Article ဘမျိုးဘိုးတူ အိန္ဒြာကျော်ဇင်(အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
Next Article ယနေ့မှာ သိန်း(၂၀) နဲ့လေလံအောင် သွား ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားလေး